မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမည်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဗမာနှင့်မြန်မာ ဝေါဟာရများအားရှင်းလင်း ပြသခြင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာဘာသာတွင် "မြန်မာ" သို့မဟုတ် "ဗမာ" ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "Burma" (ဘားမား) သို့မဟုတ် "Myanmar" ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ ၁၉၈၉ တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် အင်္ဂလိပ်အမည် "Union of Burma" မှ "Union of Myanmar" သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အငြင်းပွားမှုများရှိသည်။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို စာပေသုံးအရ "မြန်မာ" ဟုခေါ်ဆိုပြီး စကားအသုံးတွင် "ဗမာ" ဟုခေါ်ဆိုသည်။ မြန်မာအဘိဓာန်တွင် 'မြန်မာ' ကို "မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစဉ်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြသော တိုင်းရင်းသားများကို ခြုံခေါ်သောအမည်" ဟုဖွင့်ဆိုထားပြီး 'ဗမာ' ကို "တိဗက်–မြန်မာအုပ်စုဝင် ဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုပြောသော မြန်မာတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုး" ဟုဖွင့်ဆိုထားသည်။ ထိုစာလုံးနှစ်လုံးစလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူအများစုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုကို ခေါ်ဝေါ်သည့်အမည်မှ ဆင်းသက်လာကြသည်။
"ဗမာ" အခေါ်အဝေါ်သည် "မြန်မာ" အခေါ်အဝေါ်မှ ဆင့်ပွားဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များကလည်း "ဗမာ" သည် "မြန်မာ"၏အသံကို ပြောင်းဖတ်ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။ ၁၉၃၀ တွင်ပေါ်ပေါက်လာသော တို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ ကြေညာချက်တွင်အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ "မြန်မာ" ဟူသောစကားမှာ မြန်သည်၊ မာသည်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်သော်လည်း နှာသံပါ၍ ဘောင်ကျဉ်းသည်၊ အားနည်းသည်။ ရှမ်း၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ပလောင်၊ တောင်သူ၊ ဆလုံ၊ နာဂ၊ မြန်မာ စသော ဗမာတိုင်းရင်းသားများအားလုံးကို ခြုံ၍ငုံမိစေရန် "ဗမာ" ဟူသော စကားလုံးကိုရွေးသည်။ အသံထွက်မာကျော၍ သုံးစွဲသည်။ တဖန် ဘကုန်းနှင့် "ဘမာ" မရေးဘဲ ဗလချိုက်နှင့်ရေးခြင်းမှာလည်း "ဘ"သည် ရန်ဖန်ရံခါ "ဗ"သံထွက်သဖြင့် စိတ်မချရသောကြောင့် ဗလချိုက်နှင့် "ဗမာ"ဟုရေးသည်။ ”
တို့ဗမာအစည်းအရုံးအသင်းကြီး လူသိများလာသည်နှင့်အမျှ "ဗမာ" အသုံးအနှုန်းလည်း တွင်ကျယ်လာခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ကာလက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်၊ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ စသောအဖွဲ့အစည်းမျာသည် "ဗမာ"ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလတွင် ဂျပန်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဗမာနိုင်ငံတော်အမည်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ တွင် တရားဝင် "မြန်မာ"အမည်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သော်လည်း "ဗမာ"အမည်ကို ဆက်လက်သုံးစွဲမှုများရှိခဲ့သည်။ မြန်မာဘာသာသို့ ဘာသာပြန်စာအုပ်အချို့များတွင်လည်း "ဗမာပြည်"/"ဗမာနိုင်ငံ" ဟုပြန်ဆိုထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
အေဒီ ၉ ရာစုခန့်တွင် ရှေးမြန်မာများသည် ဧရာဝတီမြစ်အလယ်ပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြပြီး ပုဂံပြည်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် မရမ္မဟုခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ "မြန်မာ"၏ အစောဆုံးအထောက်အထားမှာ ၁၁ဝ၂ ခုနှစ်တွင်ရေးထိုးခဲ့သော မွန်ကျောက်စာတစ်ချပ်တွင် နိုင်ငံအမည်ကို "မရမာ၊ မိုင်းရ်မာ" (Mirma/Mranma) စာလုံးပေါင်းထားသည်။ ၁၁၉ဝ ခုနှစ်က ရေးထိုးခဲ့သည့် မြန်မာကျောက်စာ မှတ်တမ်းတွင်လည်း နိုင်ငံအမည်ကို "မရန်မာ"ဟု ရေးထိုးခဲ့သည်။
မသိင်္ဂီ၏ဖော်ပြချက်အရ "မြန်မာ"၏ ပထမဆုံးအသုံးအနှုန်းမှာ ထီးလိုမင်းလို (နားတောင်းများမင်း) လက်ထက် သက္ကရာဇ် ၅၉၇ (အေဒီ ၁၂၃၅) တွင် ရေးထိုးခဲ့သော ကျောက်စာတစ်ချပ်၌တွေ့ရပြီး "မြန်မာပြည်" ဟုရေးထိုးထားသည်။ ထိုကျောက်စာသည် "ရတနာကုန်ထမ်းကျောက်စာ" ဟုအမည်ရ၍ ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာနသည် ကျောက်စာအမှတ် ၄၃ ဟုနံပါတ်စဉ်တပ်ထားသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်က မင်းတုန်းမင်းသည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုယ် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ဘုရင် ဟူ၍ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကမြန်မာဘုရင်တို့သည် အခြာတိုင်းရင်းသားဒေသများအထိပါ အုပ်ချုပ်နိုင်လာပြီးဖြစ်သည်။
ရှေးယခင်က "မြန်မာ"၏ ရရစ်ကို လျှာလိပ်သံဖြင့်ဖတ်သည်။ ခေတ်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုလျှာလိပ်သံမှာလည်း ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ယခု"ယ"အသံဖြစ်လာသည်။
၁၉၄၈ တွင် "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ" ဟူသောတရားဝင်အမည်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံသားဥပဒေအရ "မြန်မာ"သည် မြန်မာနိုင်ငံသားကိုသာမက လူများစု"မြန်မာတိုင်းရင်းသား"ကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ ၁၉၈၂ တွင် အသစ်ရေးဆွဲခဲ့သော နိုင်ငံသားဥပဒေတွင် "မြန်မာလူမျိုး"ကို "ဗမာလူမျိုး"ဟု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်က အင်္ဂလိပ်လိုရွေးချယ်ခဲ့သည့်အမည်သည် Burma ဖြစ်သည်။ ဤအမည်သည် မြန်မာနိုင်ငံကို အနောက်တိုင်းသားများတွေ့ရှိစဉ်က စတင်အသုံးပြုသောအမည်လည်းဖြစ်သည်။ ဤအမည်မှာ ပေါ်တူဂီဘာသာ "Birmânia" ထံမှ လာပြီး ၁၈ ရာစုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်များက ထိုစကားလုံးကို မွေးစားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ထိုပေါ်တူဂီအမည်သည်လည်း အိန္ဒိယဘာသာ၏ မြန်မာနိုင်ငံကိုခေါ်သည့် အခေါ်အဝေါ်မှ ထပ်ဆင့်ရယူထားသည် ဟူ၍လည်းဆိုကြပြန်သည်။
ရှေးအခါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ခေါ်သည့်အမည်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
Bermah (၁၈ ရာစု၏ အစောဆုံးသော ဥရောပမြေပုံများ)
Birmah (ချားစ် သော်မဆင်၏ မြေပုံ၊ ၁၈၂၇)
Brama (သောမတ်စ် ကစ်ရှင်၏ မြေပုံ၊ ၁၇၈၇)
Burmah (ဆယ်မျူအယ် ဒွန်း၏ မြေပုံ၊ ၁၇၈၇)
Burma (ကီး ဂျွန်ဆင်၏ မြေပုံ၊ ၁၈၀၃)
Burmah (ယူဂျင်း ဝီလီယမ်စ်၏ မြေပုံ၊ ၁၈၈၃)
Burma (The Timesသတင်းစာရှိ စာလုံးပေါင်း)
နောက်ပိုင်းတွင် "Burma" စာလုံးပေါင်းသည် စံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၄၈ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် "Union of Burma" ဟူသော တရားဝင်အမည်ဖြင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်လည်း တရားဝင်အမည်ကို "Socialist Republic of the Union of Burma" ဟူ၍လည်းထက်မံပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်က မြန်မာစစ်အစိုးရသည် နေရာဒေသများ၏ အင်္ဂလိပ်အမည်များကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲရန် ကော်မရှင်တစ်ခု ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ကော်မရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၁၉ ရာစုက ဗြိတိသျှကိုလိုနီအာဏာပိုင်များက သုံးနှုန်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်္ဂလိပ်အမည် စာလုံးပေါင်းများအား မြန်မာအသံထွက်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်စေရန် ဖြစ်သည်။ သာဓကအားဖြင့် "Rangoon" ကို Yangonဟု ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အမည်ကိုမူ "Burma" အား "Myanmar" ဖြင့် အစားထိုးရန် ကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမအကြောင်းမှာ Burma ၏ မြန်မာဘာသာပြန်မှာ "မြန်မာ"ပင်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အင်္ဂလိပ်အမည်နာမများကို မြန်မာအသံထွက်များဖြင့် ညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေတွင် ယခင်က "မြန်မာ"ဟုခေါ်သော လူဦးရေအများဆုံးလူမျိုးစုကို "ဗမာ" ဟုပြောင်းလဲထားသည်။ ဤသည်ကိုထောက်၍ "မြန်မာ" သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်ရင်းသားများအားလုံးကို ရည်ညွှန်းကြောင်း စစ်အစိုးရကထောက်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအချက်မှာ Burma သည် "ဗမာ" အခေါ်အဝေါ်နှင့် ပို၍နီးစပ်ကြောင်း စစ်အစိုးရကဆိုသည်။
"Myanmar" ဟူသောသတ်ပုံကို "Myanma" ဟူ၍ရေးလျင်လည်းရနိုင်သည်။ သို့သော် "Myanma" ကို "မြန်မာ့" ဟုဖတ်နိုင်သဖြင့် ထိုကော်ရှင်သည် သံရှည်ဖြစ်ကြောင်းသိသာစေရန် "r" ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုလုပ်ပြုလုပ်ခြင်းကို "r" အသံမဖတ်သော အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများသာ နားလည်နိုင်၍ အမေရိကန်ကဲ့သို့ "r" အသံဖတ်သော အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများက နားလည်သဘောပေါက်မည်မဟုတ်ပေ။
မြန်မာဘာသာစကားတွင် ၁၉၃ဝ ဝန်းကျင်ကတည်းက နိုင်ငံ၏အမည်နှင့်ပက်သက်၍ အငြင်ပွားမှုများရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စစ်အစိုးရ၏ဆုံးဖြတ်မှုသည် ထိုအငြင်းပွားမှုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ကူးစက်လာသည်။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် "မြန်မာ"သည် "ဗမာ"ထက်စာလျှင် လူနည်းစုများကို ပိုမိုခြုံငုံသည်ဟု အကြောင်းပြခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာဘာသာတွင် မြန်မာသည် ဗမာထက်ပို၍ စာစကားဆန်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လူနည်းစုများကို ပို၍ခြုံငုံသည်ဟု ပြောလင့်ကစား အတိုက်အခံများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များက ဤအင်္ဂလိပ်လို "Myanmar" သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအား စော်ကားရာရောက်စေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဗမာစကားကို မပြောတတ်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများသည် အင်္ဂလိပ်လို "Burma" အခေါ်အဝေါ်ကို နားယဉ်နေကြပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည် ဗမာလူမျိုးတို့က တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအား ကြီးစိုးလိုခြင်းကို ရောင်ပြန်‌ဟပ်လျက်ရှိသည်ဟု ရှုမြင်သုံးသပ်ကြသည်။
စစ်အစိုးရသည်နိုင်ငံအမည်ကို မြန်မာလိုပြောင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်လိုသာ ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပထမပိုင်းတွင် "Myanmar" ဟူသောဝေါဟာရက လူနည်းစုများအားလုံးအား ခြုံငုံစေသည်ဟူသည့် စစ်အစိုးရ၏ ဟန်ဆောင်ကာကွယ်ပြောဆိုခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ အတိုက်အခံများသည် မြန်မာစကားအားဖြင့် "မြန်မာ"ဟု ရေးသားသုံးစွဲခြင်းကို မဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသော်လည်း အင်္ဂလိပ်လို "Myanmar" ဟု ရေးသားသုံးနှုန်းခြင်းကိုမူ ဆန့်ကျင်ကြသည်။ မည်သည့်အတိုက်အခံကမျှ အရပ်သုံးဖြစ်သည့် "ဗမာ"ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်အဖြစ် ထောက်ခံခြင်းမပြုပေ။
ဘာသာဗေဒနည်းအရ ဝေဖန်မှုများလည်းရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သောကော်မရှင်တွင် ဘာသာဗေဒပညာရှင် လေးဦးသာပါဝင်ပြီး အများစုမှာ ဘာသာဗေဒကိုနားမလည်သော အရပ်သားနှင့် စစ်ဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအမည်သစ်များသည် ဘာသာဗေဒနည်းအရ ယုံကြည်ရမှုကင်းမဲ့နေသည့်အပြင် မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်လည်း‌ဖြစ်နေပါသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်က အင်္ဂလိပ်အမည် ပြောင်းလဲမှုအပြီးတွင် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောသူတို့သည် အမည်ဟောင်းရောအမည်အသစ်ပါ နှစ်မျိုးလုံးသုံးစွဲကြသည်။ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကိုမခံယူဘဲ နိုင်ငံအမည်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းသည် မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် အမည်ဟောင်းများကို ဆက်လက်အသုံးပြုမှုလည်းရှိသည်။
အမည်သစ်မြန်မာကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြု၍ အမည်ပြောင်းကြောင်း ကြေညာချက်အပြီး ငါးရက်အတွင်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများလည်း ထိုအမည်သစ်ကို သုံးနှုန်းသင့်‌ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။။ သို့သော် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံကို "Burma" ဟူ၍သာ ဆက်လက်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသည်။ အမေရိကန်အစိုးရသည် မြန်မာ့ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုများအား တစိုက်မတ်မတ် ထောက်ခံအားပေးသောအားဖြင့် အသုံးပြုသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင် စစ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်‌ဝင်းက စစ်အစိုးရသည် လွန်ခဲ့သည့် ၁ဝ နှစ်ကျော်ကာလက မိမိတို့၏နိုင်ငံအား Burma မှ Myanmar ဟူ၍အစားထိုးပြောင်းလဲပြီဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်အစိုးရ၏ "Burma" ကို ဆက်လက်သုံးစွဲမှုအပေါ် မကျေမနပ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၉ တွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဘာရက် အိုဘားမားနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်လာစဉ်က "Burma" ရော "Myanmar" ပါ နှစ်မျိုးလုံးသုံးစွဲခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးသမားများသည် "Myanmar" အခေါ်အဝေါ်ကို စတင်သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။ အာဆီယံအသင်းနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ဂျာမနီ၊ ဩစတြေးလျ၊ ကနေဒါနှင့် ရုရှားအစိုးရများက "Myanmar" ကို တရားဝင်အမည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည်။
သတင်းမီဒီယာလောက၌လည်း မတူညီသောအသုံးပြုမှုများရှိသည်။ CNN၊ New York Times၊ Reutersစသော အမေရိကန်အခြေစိုက် သတင်းဌာနများသည် "Myanmar" ကို အသုံးပြုကြသော်လည်း အချိုဌာနများသည် "Burma" ကိုသာဆက်လက်သုံးစွဲသည်။ ဘီဘီစီသတင်းဌာနသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Burma မှ Myanmar သို့ ပြောင်းလဲသုံးစွဲခဲ့သည်။ အချို့သတင်းဌာနများသည် "Myanmar, also known as Burma" ဟူသောစကားရပ်ဖြင့် သုံးစွဲလျက်ရှိသည်။
သမိုင်းပညာရှင်များသည် ၁၉၈၈ မတိုင်မီကာလများအတွက် "Burma" ဟုသုံးပြီး ၁၉၈၈ အလွန်ကာလများအတွက် "Myanmar" ဟုအသုံးပြုခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသောချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
ဤကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖွဲ့စည်ပုံအခြေခံဥပဒေတွင် နိုင်ငံကိုမည်သို့ခေါ်ဝေါ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိသောကြောင့် "Burma" နှင့် "Myanmar" နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုလို့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရသည် "Myanmar" ၏ နာမဝိသေသနအဖြစ် "Myanma" (မြန်မာ့) ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ သို့သော်အများစုက "Burmese" ကိုသာဆက်လက်သုံးစွဲကြသည်။ မြန်မာဘာသာစကားကို "Myanmar language" ဟူ၍တရားဝင်ဖော်ပြထားသော်လည်း နိုင်ငံရပ်ခြားများ၌ "Burmese language" ဟူ၍သာအသိများကြသည်။ အချို့သည်လည်း အင်္ဂလိပ်ဆန်ဆန် "Myanmarese" သို့မဟုတ် "Myanmese" ဟူ၍သုံးနှုန်းကြသည်။ "Burman" (ဘားမန်း) ဟူသောစကားလုံးရှိသော်လည်း ထိုစကားလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လူများစုဗမာများကိုသာရည်ညွှန်းသည်။ "Burmese" သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားကို ခြုံငုံ၍ရည်ညွှန်းသည်။
အာသံဘာသာတွင် အာဟုမ်ပြည် (Ahom kingdom) ၏ ဘုရင်သုကဖာမင်း (Sukaphaa) သည် မြန်မာပြည်ကို စတင်တွေ့ရှိစဉ်က মান দেশ Man Dex ("မန်းနိုင်ငံ") ဟူ၍ခေါ်ဆိုသည်။ အာသံပြည်ကို မြန်မာတို့ကျူးကျော်သည့်ကာလများကို মানৰ দিন (မန်းတို့၏နေ့ရက်များ) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
တရုတ်ဘာသာတွင် မြန်မာအမည်ကို ပထမဆုံး‌တွေ့ရှိမှုမှာ ၁၂၇၃ တွင်ဖြစ်ပြီး 緬 (အသံထွက် မြန်) ဟူ၍ရေးထားသည်။ ယခုတွင် မြန်မာကို 緬甸 (အသံထွက်မြန်တျန့်) ဟူ၍ ရေးလျက်ရှိသည်။ ဗီယက်နမ်ဘာသာတွင်လည်း Miến Điện ဟူ၍ရေးပြီး ထိုတရုတ်ခေါ်အဝေါ်မှ ဆင်းသက်လာသည်။
ဂျပန်ဘာသာတွင် မြန်မာ (+ミャンマー) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြသော်လည်း ဘီရုမာ (ビルマ) ဟူ၍လည်း ထည့်ရေးကြသည်။ ဘီရုမာ သည် အပြောတွင်များ၍ မြန်မာ သည် အရေးတွင်များသည်။ ဗမာစောင်းရုပ်ရှင် (Biruma no tategoto) တွင် ဘီရုမာဟူသော အမည်သည် စာဖတ်သူတို့အား စိတ်ခံစားမှုပေးစွမ်းနိုင်သည် ဟူ၍ယုံကြည်ကြသည်
အိန္ဒိယဘာသာတွင်မူ မြန်မာကို Brahmadesh (ဗြဟ္မာတိုင်း) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြသည်။
စပိန်ဘာသာနှင့်အီတလီဘာသာတို့တွင် "Birmania" (ဘီယာမာနီးယား) ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပေါ်တူဂီဘာသာတွင် "Birmânia" ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပြင်သစ်ဘာသာတွင် "Birmanie" (ဗြာမနီ) ဟူ၍လည်းကောင်း အသီးသီးသုံးစွဲကြသည်။
↑ "Should it be Burma or Myanmar?" (in en-GB)၊ BBC News၊ 2011-12-02။
↑ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန (၂၀၀၈)။ မြန်မာအဘိဓာန် (ဒုတိယ ed.)။ pp. ၂၄၉၊ ၂၉၂။
↑ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့ (၁၉၇၆)။ တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း။ ရန်ကုန်: ထင်ကြည်။ pp. ၁၃၃။
↑ Victor B Lieberman (2003)။ Strange Parallels: Southeast Asia in Global Context, c. 800-1830, volume 1, Integration on the Mainland။ Cambridge University Press။ pp. 88–112။ ISBN 978-0-521-80496-7။
↑ Thant Myint-U (2006)။ The River of Lost Footsteps--Histories of Burma။ Farrar, Straus and Giroux။ p. 56။ ISBN 978-0-374-16342-6။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Hall၊ DGE (1960)။ "Pre-Pagan Burma"။ Burma (3 ed.)။ p. 13။
↑ Ma Thanegi (2011)။ Defiled on the Ayeyarwaddy: One Woman's Mid-Life Travel Adventures on Myanmar's Great River။ ThingsAsian Press, San Francisco။ p. 97။ ISBN 978-1-934159-24-8။
↑ Myint-U၊ Thant (2001)။ The Making of Modern Burma။ Cambridge: Cambridge Univ. Press။ ISBN 0-521-79914-7။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် (၁၉၄၈)။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှုအက်ဥပဒေ။ “..... "မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးမျိုး" ဆိုသည်မှာ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ရှမ်းလူမျိုးကိုလည်းကောင်း .....”
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် (၁၉၈၂)။ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ။ “..... ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့် တိုင်းရင်းသားနှင့် မျိုးနွယ်စုများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။”
↑ Teng၊ Tiffany။ Why This Beautiful Country Is Known by Two Names။
↑ Houtman၊ Gustaaf (1999)။ Mental culture in Burmese crisis politics။ ILCAA Study of Languages and Cultures of Asia and Africa Monograph Series No. 33။ Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa။ pp. 43–54။ ISBN 978-4-87297-748-6။
↑ Scrivener၊ Leslie။ "The Burma question"၊ TheStar.com၊6October 2007။
↑ U.S. Embassy in Burma (in en-US)။
↑ Bureau of East Asian and Pacific Affairs (December 2007)။ Background Note: Burma။ U.S. Department of State။
↑ "Myanmar foreign minister protests U.S. use of name 'Burma'"၊ Crisscross News၊ 1 August 2005။ [လင့်ခ်သေ]
↑ "Burma or Myanmar? Obama calls it both on visit" (News & blogging)၊ Bristol, England: Hybrid News Limited၊ 19 November 2012။ "YANGON, Burma (AP) — Officially at least, America still calls this Southeast Asian nation Burma, the favored appellation of dissidents and pro-democracy activists who opposed the former military junta’s move to summarily change its name 23 years ago."
↑ Roughneen၊ Simon (22 January 2012)။ Is it 'Burma' or 'Myanmar'? US officials start shifting.။ The Christian Science Monitor။
↑ Dittmer၊ Lowell (2010)။ Burma Or Myanmar? The Struggle for National Identity။ World Scientific။ p. 2။ ISBN 9789814313643။
↑ "Burma vs. Myanmar: What's inaName"၊ Deutsche Welle၊ 1 October 2007။
↑ Commonwealth of Australia၊ Department of Foreign Affairs and Trade။ Australian Embassy in Myanmar။
↑ Government of Canada၊ Global Affairs Canada။ Embassy of Canada to Myanmar, in Yangon။
↑ "Myanmar profile"၊ BBC၊ 16 May 2014။
↑ Jon Williams။ "Burma: What's inaname?"၊ BBC၊ 14 June 2012။
↑ Memmott၊ Mark။ "Why Burma? Why Myanmar? Why Both?"၊ The Two-Way: NPR's News Blog၊ NPR၊2December 2012။
↑ Steinberg၊ David I. (2001)။ Burma: The State of Myanmar။ Georgetown University Press။ p. xi။ ISBN 0-87840-893-2။3July 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ South China Morning post, What's inaname? Not much, according to Aung San Suu Kyi, who tells diplomats they can use Myanmar or Burma, Saturday, 23 April 2016
↑ Kumano၊ Shin'ichirō။ "ミャンマー、知って損はない6のキホン"၊6February 2012။ 13 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 May 2013။
↑ 'Birmanie ou Myanmar ? Le vrai faux débat francophone' – La France en Birmanie။ Ambafrance-mm.org။
↑ "Birmanie: 87.000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh en dix jours, selon l'ONU"။ L'Obs။4September 2017။9September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ L'actualité sur Birmanie par L'Obs။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ၏_အမည်များ&oldid=744293" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။